တရုတ်စက်ရုံ - - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းနှင့်အတူ thread
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုက်ဒရောလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း > အမျိုးအစား Tube Fittings ကိုက် > သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ thread
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ Thread ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
-40 ~ + 100Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စသည်တို့ကိုကာဗွန်သံမဏိ, ကြေးဝါ, သံမဏိ။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ရေ, ရေနံ, ရေနွေးငွေ့, Air လေကြောင်းလိုင်း
အဆိုပါစက္ဏူထူအတွက်ထုပ်ပိုး, polybag အတွင်းစိတ်ဟာစက္ဏူထူ, ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ်များအတွက် pallet မှစက္ဏူထူ
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ Thread ၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
ကာဗွန်သံမဏိလုပ် 1. ။
2. သင်အသုံးပြုများအတွက်ထုတ်ကုန်လွယ်ကူသည်, သင်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
3. Scope: အပြည့်အဝအရွယ်အစား။
4. အားလုံးထုတ်ကုန်အာမခံတင်ပို့မတိုင်မီ 100% inspectioin ဖြစ်ကြသည်။
5. Prompt ကိုဖြန့်ဝေ။
6. ဖောက်သည်-orientated ဒီဇိုင်း။
burrs နှင့် impurites မပါဘဲ 7. ပြီးပြည့်စုံသောမျက်နှာပြင်ချောမွေ့။
လျှောက်လွှာ:ရေနံ / ဂက်စ် / ရေ / ရေနွေးငွေ့ / Air ကိုစက်မှု။
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ Thread ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:အဆိုပါစက္ဏူထူအတွက်ထုပ်ပိုး, polybag အတွင်းစိတ်ဟာစက္ဏူထူ, ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ်များအတွက် pallet မှစက္ဏူထူ။
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality နှင့်အတူ thread
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Adapter ကိုအတူ threadသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျြော